Paz Castelló. Kubvunzana nemunyori we Hapana mumwe wedu achave netsitsi | Zvazvino Zvinyorwa
Paz Castelló. Kubvunzana nemunyori we Hapana mumwe wedu achave netsitsi
Mariola Diaz-Cano Arevalo | | Hurukuro, Vanyori, Novela, dzakawanda
Mufananidzo: Paz Castelló webhusaiti.
Paz Castelló, munyori anobva kuAlicante ane basa refu munyika yekutaurirana, anopa nyowani nyowani yakanzi Hapana mumwe wedu achanzwira tsitsi. Akatanga kutsikisa mu2013 na Kufa kwe9. Mamwe mazita ave ari Zita rangu rakanyorwa pamusuwo wechimbuzi, Mwedzi gumi nemasere uye zuva y Iko kiyi 104. Le ndokutenda zvikuru inguva yawakatsaurira kwandiri izvi indavhiyu kwaanotiudza nezve iyo nyowani nyowani uye nezvimwe zvakawanda.
Paz Castelló - Bvunzurudzo
LITERATURE CURRENT: Yako nyowani nyowani iri Hapana mumwe wedu achanzwira tsitsi. Chii chaunotiudza mairi?
PAZ CASTELLÓ: En Hapana mumwe wedu achanzwira tsitsi (Editions B) nyaya nyaya yaCamila naNora, iyo pakutanga ingaratidzika kuva vakadzi vaviri vakasiyana kwazvo nezera uye nemamiriro ezvinhu akakosha, asi zvinobva zvaonekwa kuti vane chinhu chakafanana: paviri Ivo vaishandiswa nevarume venguva yavo yakapfuura uye ikozvino havasi kutya kusangana navo, kuita sarudzo dzinokanganisa hupenyu hwavo. Camila mukadzi akura anosarudza kusiyana nemurume wake. Izvi zvinoita kuti asvike pachibvumirano chekufungidzira chakamunakira.
Achiri kuongorora zvakavanzika zvakavanzika zvewaimbova mudiwa wake, anosangana naNora, mudzidzi wechidiki, ane makore makumi maviri mudiki kwaari, anga achichengeta chakavanzika chakaipa kwemakore uye anouya kuAlicante achitsvaga kutsiva. Pakati paCamila naNora hukama hwakakosha hunomuka nemumvuri we thriller, asi nehukama kumusoro. Ndiyo nyaya yehukama uye simba revakadzi, nemutoro wezvakavanzika uye hunyengeri hune simba kwazvo.
AL: Unogona kudzokera kuyeuke iro rekutanga bhuku rawaverenga?
PC: Ini ndinofunga ndinorangarira iyo yakanzi titled Ndarama Nyaya. Ini handina kukwanisa kukuudza munyori. Yaiva imwe kuunganidzwa kwenyaya zvine hunhu asi chaizvo zvenguva. Baba vangu vakanditengera kumusika wekutengesa. Aifarira zvekare zvinhu zvekare. Yakanga iri mukutanga kwemakumi manomwe uye panguva iyoyo yaive bhuku rekare. I remember akanditengerawo Moby Dick, asi ndakazoiverenga pava paya.
AL: Uye nyaya yekutanga iwe yawakanyora?
PC: Chinhu chekutanga chandakanyora chaive nhetembo. Kubva ndichiri mudiki kwazvo ndakatanga kuverenga kubwinya kwakasimba uye ndakachida. Ndinofunga, neimwe nzira, ndanga ndichiedza kumutevedzera.
PC: Pandaiva nemakore gumi nemaviri ndakaverenga Mhepo yekumabvazuva, mhepo yekumadokero, ivo Pearl S. Buck. Zvakandimaka zvakanyanya nekuti kuburikidza nebhuku uye pazera diki kudaro, ini ndakawana imwe tsika, imwe nzira yekufunga nekunzwisisa nyika. Tsika yechinyakare yechiChinese maringe nepfungwa dzekumadokero idzo inoverengeka yacho yaindishamisa. Kunyanya iro basa revakadzi munharaunda dzakasiyana.
AL: Iye munyori anodiwa? Unogona kuve unopfuura rimwe uye wenguva dzose.
PC: Ndiri kuzogara naye Agatha Christie, zvemhando iyo yaakanyora uye yekuve a kupayona uye mukadzi anoonekera kwazvo. Ehezve kune vanyori vasingaverengeke vanondinakidza, asi sezvo kutaura nezvavo vese kungave kusaruramisira kune vamwe vazhinji, ini ndasara nemukadzi mukuru wezvakavanzika.
PC: Zvakaoma kusarudza, asi zvinouya mupfungwa semuenzaniso, The Little Prince. Semwana mudiki ndingadai ndaida kuti ive chaiyo. Icho chaive chinhu chakaita sekufungidzira shamwari. Zvakare iyo Alicia rakanyorwa naLewis Carroll. Asi iyo list ingadai iri zvisingaperi.
AL: Chero yakasarudzika tsika kana uchinyora kana kuverenga?
PC: Maviri chete: kunyarara uye mbatya dzakanaka. Kubva ipapo rwendo runotanga.
PC: Ndinofanira kunyora kumba. Ini handizive kutarisa kune imwe nzvimbo. Kune avo vanonyora mumaraibhurari kana kunyange zvitoro zvekofi. Ndinoda kusurukirwa nerunyararo. Kwandiri irudzi rwemhando yekutenderera yandinoda kusangana kwakazara.
AL: Mamwe marudzi aunoda?
PC: Chandinonyanya kufarira thriller asi ndakaverenga zvese. Chandinokumbira ndechekuti ive ngano yakanaka uye kuti inyatso kutaurwa. Ndiri zvakare muverengi we nhetembo and of theatre.
KU: Chii chauri kuverenga izvozvi? Uye kunyora?
PC: Yekupedzisira yeTrilogy Blas Ruiz-Grau, Haufe. Ndiri kupera inoverengeka. Zvimwe pamba noir ine nyaya inopisa kwazvo yemagariro. Parizvino ndinogona kuverenga.
AL: Iwe unofunga kuti chiitiko chekutsikisa chiri sei? Mabhuku akawandisa, vanyori vakawandisa?
PC: Ndiyo yakaoma kwazvo uye yakaoma nyika. Anokwikwidza zvakanyanya uye anorarama kwenguva pfupi apo iyo mitemo yekushambadzira dzimwe nguva ine simba kudarika iyo yekunyora. Ndinoedza kutiza yesimba iro dzimwe nguva rinokomberedza chikamu uye funga nezvekugadzira mabhuku akanaka. Ndiri munyori, ndiro basa rangu. Zvese zvimwe zviri kunze kwesimba rangu.
Ini ndinofunga pagara paine vanhu vanonyora, chete kuti internet yakaita kuti tiwedzere kuoneka. Pakupedzisira zvinowanzoitika kumwe kuenzanisa pakati pekupa uye kudiwa, semune chero chikamu. Izvi hazvireve kuti zvakanaka uye kuti kukuvara kwechibatiso hakuitike.
AL: Inguva yedambudziko ratiri kurarama yakakuomera here kana iwe uchave unokwanisa kuchengeta chimwe chinhu chakanakira enganonyorwa dzeramangwana?
PC: Ini pachangu, dambudziko iri rave richipfumisa. Neraki, hutano hwakatiremekedza. Ini ndinogara ndichiedza kuburitsa iyo yakanaka kubva kumatambudziko akaoma. Pakupera kwezuva, ndiyo nzira yatinofanira kushandura zvinhu nayo. Ini handifunge, zvakadaro, kuti ndinoishandisa mumabhuku andinonyora. Ini ndiri wekufunga kuti zvinotora nguva uye kureba kune kumashure kweizvo isu takadzidza kuisa mukati uye kutibatsira zvine hungwaru. Ini ndinoishandisa zvakanyanya padanho rega. Ndinopa kutenda mazuva ese nezvakanaka zvese zvandinopihwa neupenyu. Ini ndinokoshesa zvinhu zvidiki zvakanyanya.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Literature » dzakawanda » Paz Castelló. Kubvunzana nemunyori we Hapana mumwe wedu achave netsitsi
Meso eyero emakarwe